Buuxi foomka hoose si aad u diiwaangeliso ururkaaga. Diiwaangelintu waxay u baahan tahay lacag $ 29.00 sanadkiiba. Marka diiwaangelintaada la ansixiyo, waxaad gali kartaa koontadaada oo aad cusbooneysiisaa astaantaada. Mahadsanid!
Email ku noqo*
Furaha dib u celin*
Ma rabtaa inaad bixiso macluumaad dheeri ah? Haa Maya
Xeerarka iyo Amniga
Shuruudaha & riix halkan
Diiwaangelintu waxay ubaahan tahay in la bixiyo $ 29.00 sanadkiiba. Marka lacagta la bixiyo, diiwaangelintaada ayaa dib u eegi doonta oo dhaqaajin doona maamulaha. Waxaad heli doontaa email marka koontadaadu firfircoon tahay.
Waan aqbalayaa shuruudaha iyo shuruudaha*
Xaqiiji inaad Aadam tahay
Si aad u buuxiso dukumiintiga oo aad hayso xisaabtaada, fadlan riix halkan inaad bixiso lacagtaada.